भारतबाट करोड बढी लिएर फर्केका बुचा मृ,त फेला, गाउँमै दबाइयो घटना – Dainik Sangalo
भारतबाट करोड बढी लिएर फर्केका बुचा मृ,त फेला, गाउँमै दबाइयो घटना
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८ समय: १२:३६:०८
गुल्मी । केहिदिन अघि गुल्मीको खज्र्याङ्गमा भएको एकजना व्यक्तिको र,ह,स्यमय मृ,त्यु घटना त्यहाँका केहि जनप्रतिनिधि लगाएतका अगुवाहरुले गाउँमै गुु,प चु,प पारेका छन् । असार ३१ गते दिउँसो घर नजिकै गोठमा मृ,त फेला परेको भनिएका छत्रकोट गाउँपालिका-५, साविक खज्र्याङ्ग गाविसको अज्र्याङ्गवासका ६८ बर्षीय नरबहादुर बुचाको मृ,त्यु घटना त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले गाउँमै गु,प चु,प पारेका हुन् ।
त्यस गाउँमा झण्डै ४५ घरधुरी बुचा थरका मगर समुदाय बसोबास गर्दछन् । उनीहरुले बुचा समाज गठन गरका छन् । त्यस समाजका अध्यक्ष रामबहादुर बुचा हुन् । त्यस बुचा समाजमा जो कोहीको मृ,त्यु हुँदा पहिला श,व हेर्ने एक नम्वरका मलामीको लिस्टमा उनै अध्यक्ष बुचा हुने चलन छ। तर, नरबहादुरको मृ,त्यु हुँदा उनलाई बोलाइएन । साँझ ६ बजे अघिनै त्यस वडाकी वडा सदस्य निर्मला कुँवर झेंडी , तुलबहादुर बुचा र रामबहादुर सिंजाली त्यस घरमा जम्मा भई आपसमा सरसल्लाह गरि माधव बुचा , महेन्द्र बुचा , रुद्रा बुचा , कुशल बुचालाई बोलाएर मृतकको शरिरलाई गोठबाट यता घरतिर लिएर आउनुस्,हामीले सबै कुरा मिलाई सकियो भनेर बोलाए।
अध्यक्ष रामबहादुर बुचालाई साँझ ८ बजेसम्म पनि थाहा नदिएपछि उनी रिसले चुर हुँदै मृतकको घरमा पुगेर मैले खोलेर लास हेर्छु भन्न पुगे । उनले ला,स खोलेर हेर्छु , नहेरेसम्म ला,स उठाउन दिन्न भने । उनीहरुले ला,स खोलेर हेर्न दिन्नौं, बरु तलाई पनि मा, x रे, x र दुई वटा ला, स बनाएर लैजान्छौं भनेर ध, x म्का, एको बुचा बताउँछन् । तिनै ब्यक्तिहरुले मृ,तक नरबहादुरको शरिरलाई र, x सीबाट उ,तारेर घरमा ल्याई ला,सलाई पुर्णरुपमा कपडाले ल,पेटी बाँ, x धेर राखियो । पछि गाउँका केहि ब्यक्तिलाई बोलाइयो र रातको करिव ११ बजेतिर लासलाई गाउँकै महेश र बैकुण्ठ भन्ने ब्यक्तिको जीपमा राखेर अ,न्त्य,ष्टिका लागि रिडी हिँडालियो ।
अध्यक्ष बुचा र उनकी श्रीमती करिव ५ किलो मिटर दूरीमा रहेको खज्र्याङ्ग प्रहरी चौकीमा राती नै पुगेर मौखिक उ,जुरी गरे । तर विभिन्न जनप्रतिनिधी सहितका मानिसहरुले बुचा दम्पत्तीलाई दवाव दिएर ला,स ज,लाउन मञ्जुर छु भन्ने कागजात गराईयो त्यस प्रहरी चौकीमा । त्यस चौकीका ईञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक तिलकबहादुर नेपाली भन्छन् -‘ पहिला रामबहादुर बुचाको फोन आयो , उनको कुरा बुझिएन र मैले वडा सदस्य निर्मला कुँवर झेडीलाई फोन गरेर सोधे, र हामी आउँछौं भनेर भने । तर उहाँले नसाको औषी खाई रहने नरबहादुरको ह्दयघात बाट मृत्यु भएको , आउन पर्दैन भने पछि बिश्वासमा परियो ।
पछि रिडीमा लगिएको शव अरुले हेरे पछि शं, x का स्पद भनियो र मैले रिडीको बसपार्कमा डिउटी गर्ने एक जना हवल्दारलाई फोन गरेर विहान ५ बजे सम्म रोके तर पछि जता–ततैबाट दवाव आएपछि ला,स जलाइयो । उनले ईलाका वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यस घटनाको जा,हेरी गर्न खोज्दा–खोज्दै मलामीहरुले जबरजस्त ला,स ज,लाएर ग,ल्ती भएको स्वीकार गरे ।
ला,स खो,लेर हेरेपछि बल्ल थाहा पाए मलामीहरुले
रिडीमा पुगेर लास खोलेर हेर्ने क्रममा नरबहादुरको टाउको जता फर्कायो उतै फर्किने,डो, रीले बे,स्सरी क, x सेर नि, x लाम्मे र ग,हिरो डा,म ब,सेको अवस्थामा फे,ला परेपछि सुरुमा ला,स बाँ, x ध्नेहरुले बाहेक अन्य मलामीले थाह पाए । मृतकको गहिरो डा,मसहितको फोटा मलामी जाने मध्येका माधव बुचाले फेशबुकमा राखेपछि गाउँमा स,न,स,नी फैलियो । अध्यक्ष रामबहादुर बुचाले आ,शंका गरेको कुरा सहि रहेछ भनेर भन्न थालियो । त्यस यता बुचा समाजकोा तीन पटक बैठक बस्यो । ३६ घरधुरीले सहि छापा गरेरै घटनाको छानविन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
घटना गाउँमै दबाएको भन्दै बुचा समाजले सञ्चारकर्मीलाई गाउँमै बोलाएका छन्। त्यहाँका दर्जनौ मानिसहरु चौरमा जुटेर सुरुमा ला,सलाई बाँ,धेर छिमेकीहरुलाई हेर्न नदिनेहरुसँग जवाफ माग्न थाले । वडा सदस्य निर्मला कुँवर झेडीले सुरुमा कसरी मृत्यु भयो ? भनेर सोद्धा ल, x डेर मृ,त्यु भयो भनेर किन झु,टो बोलेर गाउँवासीलाई गु,म,राहमा पारेको भन्दै घे,रेर सोध्न थाले । मृतककी बुहारी मनु बुचाले कति बेला गोठमा झु, x ण्डि, एको त कति बेला गोठ नजिकै ल, x डेको अवस्थामा देखेको भन्ने जवाफ दिएपछि घटना थप र,ह,स्यमय बनेको गाउँवासीको भनाई छ ।
साँझ ८ बजेको समयमा महेन्द्र बुचा भन्नेले फोन गरेर सानो काम छ भन्दै बोलाएर पुग्ने रुद्रबहादुर बुचा भन्छन्–‘ हामी पुग्दा त्यहाँ रहेका ६/७ जना मानिसहरुले ला,स बाँ,धेर राखेका थिए । कसरी मृ,त्यु भयो भनेर सोध्धा लोटेर मृ,त्यु भयो भन्थे । होला भन्ने ठानेर मलामी गइयो । रिडी पुगेर हेर्दा मृतको घाँ, टीका न,सा–हड्डी नै भाँ, x चिने गरी डो,री क,सिएको रहेछ ।’ उनले नरबहादुर झु, x ण्डि, x एर आ, x त्मा ह, x त्या गरेको कुरा पत्याउन नसकिने बताए ।
छिमेकी भिमकली बुचाले के भएर मृत्यु भएको हो र ? भनेर सोध्धा वडा सदस्य निर्मलाले च, क्कर आएर भुँईमा ल, x डेर मृ, त्यु भएको भनेको बताइन् । अर्की छिमेकी पार्वता बुचालाई महेन्द्र बुचाले ६ बजेतिर फोन गरेर उनका श्रीमानलाई साना–तिनो काम छ । पठाइ दिनु भनेको र पछि फोन गर्दा उनले दबाई खाँदै आईरहेका नरबहादुर च, क्कर लागेर भुइँमा ढ, x लेको बताएको तर, पछि आ, x त्मा ह, x त्या ग,रेको भनियो ।
मृतकको घर परिवारलाई तल सल्लेरीका भनिन्छ । तल सल्लेरीका नरबहादुर लो, x टेर म, x रेको भने पछि आफूहरुलाई पत्यार नगलागेको उनले बताईन । नरबहादुरले आ, xत्मा ह, x त्या गरेर म, x रेको त हुँदै नभएको उनको भनाई छ ।‘त्यस घरमा झ, x ग, x डा भईरहन्थ्यो । असार २० गते धुमधाम झ, x ग, x डा भएको देख्ने सुन्ने अर्की महिला इन्द्रकला बुचा हुन् । उनी भन्छिन्- म असार २० गते त्यस घरमा जाँदा धुमधाम झ, x ग, x डा थियो । झु, x ण्डि, x एर म, x रेको त हुँदै होईन । घ, ट, नालाई द, वाउन खोजियो । ’
Last Updated on: August 14th, 2021 at 12:36 pm